News - ပျော်ရွှင်စရာ Lantern ပွဲတော်!
သောကြာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်၊ သောကြာနေ့သည်တရုတ်အားလုံးအတွက်မီးအိမ်ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပျော်စရာပွဲတော်တစ်ခုပါ အထူးသဖြင့်ညသည်ချစ်စရာကောင်းသည်။
ဒီနေ့မှာလူတွေကမီးအိမ်ကိုဆွဲပြီးအောက်မှာစကားဝှက်ထားကြတယ်။ ထိုအခါဂိမ်းလာ: စကားဝှက်ကိုခန့်မှန်း!
စကားဝှက်ကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းနိုင်သူသည်ဆုများရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စပ်စုသောရယ်မောပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော PK ဂိမ်းနှင့်ဆင်တူသည်။
မီးပွိုင့်များကြည့်ခြင်း၊ ဖက်ထုပ်စားခြင်း၊ မီးရှူးမီးပန်းများပြုလုပ်ခြင်းစသည့်ရိုးရာအစဉ်အလာလှုပ်ရှားမှုများလည်းရှိသည်။
အင်ဖို - မီးအိမ်ပွဲ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်သမိုင်း
Lantern Festival ကိုပထမလ ၁၅ ရက်တွင်စားသည်။ "Yuanxiao" ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကာလရှည်ကြာစွာအစာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Song မင်းဆက်တွင် Lantern Festival အတွက်အစားအစာအသစ်သည်ရှေးရှေးလူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဒီလိုမျိုးအစားအစာမျိုးကိုပထမဆုံး Floating Yuanzi လို့ခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Yuanxiao လို့ခေါ်ပြီးစီးပွားရေးသမားတွေကလည်း Yuanbao လို့ခေါ်ကြတယ်။ Lantern Festival သည်သကြား၊ နှင်းဆီ၊ နှမ်း၊ ပဲငါးပိ၊ သစ်ကြံပိုး၊ walnut ဆန်၊ အခွံမာ၊ အဆိုပါဖြည့်ဖွဲ့စည်းနှင့် glutinous ဆန်ဂျုံမှုန့်သို့လှိမ့်နေကြသည်။ အဆိုပါ glutinous ဆန်ဘောလုံးပထမ ဦး ဆုံး glutinous ဆန်မုန့်ညက်နှင့်အတူအရေခွံသို့လုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ထိုနည်းလမ်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ Lantern ပွဲတော်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်အတူအသားသို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကိုဟင်းချို၊ အအေးနှင့်မီးဖို၌ပြုတ်နိုင်သည်။
Guessing fan riddles များကိုလည်း lamp riddles ဟုလည်းခေါ်သည်။ ဒါဟာရိုးရာမီးအိမ်ပွဲတော်ရဲ့ရိုးရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးပွိုင့်နက်များသည်မူလနက်နဲရာများမှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသောစတိတ်ကာလမှစတင်ခဲ့သည်။ စကားဝှက်သည်လူတို့အားခန့်မှန်းရန်နှင့်ရိုက်ကူးရန်အတွက်မီးခွက်ပေါ်တွင်ချိတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တောင်ပိုင်းမင်းဆက်မှစတင်ခဲ့သည်။ Southern Song Zhou Mi ၏ "ကိုယ်ခံပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးဟောင်းအရာများ" Deng Pin မှတ်တမ်းများက "ပိုးလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ကဗျာများ၊ လှောင်ပြောင်မှုများနှင့်ဆေးသုတ်ထားသောအက္ခရာများ၊ လျှို့ဝှက်ခေါင်းလျှိုဘာသာစကားနှင့်ပေကျင်းစကားဟောင်းများကို ဖြတ်၍ လမ်းလျှောက်သူများကိုလှောင်ပြောင်ရန်။ " Lantern ပွဲတော်၊ ဘယ်သောအခါမျှneverကရာဇ်မြို့တော်၊ Spring Festival Lantern Festival၊ လူများအထွေထွေ၊ ကဗျာများ၊ နက်နဲသောအရာများ၊ စာအုပ်များသည်မီးခွက်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
မောက်စ်ဖြင့် mouse ကို:
ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ကြွက်များသည်ညအချိန်၌ပိုးထည်ကြီးများကိုမကြာခဏစားသုံးလေ့ရှိသောကြောင့်လူတို့သည်ပထမလ၏ဆယ်ငါးရက်မြောက်သောနေ့၌ကြွက်များကိုဆန်ဂျုံယာဖြင့်ကျွေးလျှင်၊ ထို့ကြောင့်ဤသူများသည်ပထမလ၏ဆယ်ငါးရက်မြောက်သောနေ့၌ဂျုံမှုန့်အမြောက်အများကိုပြုတ်။ အချို့ကအသားလွှာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ စကားလုံးတစ်လုံးဖတ်နေစဉ်ပိုးမွှားကလေးငယ်အားသေရန်ခက်ခဲစေရန်အစာစားရန် mouse ကိုကျိန်ဆဲပါ။